सेल्फ–क्वारेन्टिनको अर्थ ‘गाउँ फर्क होइन’
कोरोना भाइरसको त्रास विश्वव्यापी फैलिएको छ। उद्गमस्थल चीनको वुहान शहर भाइरसको असरलाई शून्यमा झारेर विश्वलाई भाइरसविरुद्ध लड्न मद्दत गर्न तयार भइसकेको छ।तर, भाइरसलेइटाली, स्पेन, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विभिन्न देशमा ताण्डव मच्चाइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरिसकेको यो भाइरसको प्रकोप नेपालसम्म पुगेको प्रमाण फेला परेको छ। चैत ४ मा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ ओर्लिएकी एक युवतीमा कोराना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको यो दोस्रो केस हो। यसअघि पनि चीनबाट फर्किएका एक युवामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। तर, उनी निको भइसकेका छन्।
काठमाडौँमा कोराना संक्रमित भएको थाहा पाएपछि सरकारले आफैँ सजग र सतर्क हुन जनतालाई अपिल गरेको छ। सुविधासम्पन्न देश नै त्राहि–त्राहि बनेको अवस्थामा यो भाइरसको प्रकोप नेपालमा छिर्‍यो भने के होला ? यो सोच्दा पनि मन विचलित हुने गर्छ।
यस्तो अवस्थामा जनताले गर्ने भनेकै ‘सेल्फ क्वारेन्टिन’ अर्थात् ‘स्व–कारावास’ हो। सेल्फ क्वारेन्टिनको अर्थ गाउँ फर्क होइन, ‘जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ’ भनिएको हो।
सरकारले अपिल गरेको छ– ‘भीडभाड नगरौँ, नजाऔँ, अत्यावश्यक काममा मात्र घरबाहिर निस्कौँ, साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऔँ, स्यानिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्क लगाऔँ, दैनिक ज्वरो नापौँ, व्यक्ति–व्यक्तिबीचशारीरिक दूरी बढाऔँ।’ सरकारले गरेको अपिलको असर हुनुपर्छ, सडकमा मानिसको आवतजावतमा कमी आएको छ। तर, दशैँको बिदा मनाउन हिँडेसरी काठमाडौँ छाडेर गाउँ फर्किनेहरूको लर्कोले सरकारको अपिलको वास्ता गरेन। कि त भीडले गाउँमा यो भाइरसको असर पुग्दैन भन्ने बुझ्यो या काठमाडौँमा बसे भाइरस लागिहाल्छ भन्ने बुझ्यो। यी दुवै बुझाइ गलत हुन्। ‘काल आएपछि कसैले रोकेर रोकिने होइन’ भन्नेहरू बेपर्वाह, बिनामास्क, बिनासजगता हिँडडुल गरिरहेको जमात पनि यहाँ छ।
इटालीका मानिस पनि चीनमा प्रकोप बढ्दै जाँदा यस्तै सोच्थे। सरकारले ‘लकडाउन’को आह्वान गरे पनि मानिसको आवतजावत समूहमै भइरहेको थियो,त्यहाँ। इटालीमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या हरेक दिन बढ्दै छ। स्वास्थ्य सेवाका अत्यावश्यक सुविधाले सम्पन्न राष्ट्र भएर पनि त्यहाँदैनिक सयौँको संख्यामा मानिस मर्नुलाई हामीले पाठका रूपमा लिनुपर्छ।रोग, रोग हो। त्यसले विकसित–अविकसित, धनी–गरिब राष्ट्र भनेर छुट्याउँदैन। नागरिक तहबाट भएको लापर्बाहीका कारण नै इटलीले यो नियति भोग्नुपरेको भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन।
हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाहेर्दा यो भाइरसको संक्रमणलाई सकेसम्म रोक्न सक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। किनभने, यसले यहाँ ताण्डव मच्चाउन सुरु गर्‍यो भने हाम्रो अधीनमा केही रहनेछैन। रोक्नु अर्थात् सर्न नदिने उपायको पूर्ण अवलम्बन गर्नु नै उचित हो। भन्न त सरकारले तयारीका कार्य तीव्र गतिमा गरिरहेको बताएको छ। तर, ती तयारीप्रति न स्वास्थ्यकर्मी सुनिश्चित छन्, न आम नागरिक। सरकार मास्क लगाउने अपिल गर्दैछ तर बजारमा मास्क पाइँदैन। स्यानिटाइजर दल्नु भन्छ तर त्यसको गुणस्तर हेर्दैन। सार्वजनिक सवारीसाधनमा भीड नगर्नु भन्छ तर सबैभन्दा बढी भीड त्यहीँ देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा जनताले गर्ने भनेकै ‘सेल्फ–क्वारेन्टिन’ अर्थात् ‘स्व–कारावास’ हो। सेल्फ क्वारेन्टिनको अर्थ गाउँ फर्क होइन, ‘जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ’ भनिएको हो। शहरमा मरिने डरले गाउँ फर्किंदा यदि कसैमा संक्रमण रहेछ भनेउसको उपचारमा समस्या हुनेछ। अर्को कुरा, उसले शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि संक्रमण फैलाइसकेको हुनेछ। अनि,त्यतिखेरअवस्था कस्तो होला ? देशको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई बुझेर हामी सेल्फ लकडाउनमा बस्नु नै संक्रमित हुनबाट बच्ने र संक्रमण अरूलाई नसार्ने एकमात्र उपाय हो। यो रोगको संक्रमणबाट बच्न छिमेकी देश चीनले पूरै शहरलाई लकडाउन नगरेको भए विश्वव्यापी रूपमा अहिले हामी जे झेलिरहेका छौँ, त्यसको असर अनुमान गर्न नसकिने गरी बढ्थ्यो होला। अर्को छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्नु खुला सिमाना भएको हाम्रो देशको लागि राम्रो सन्देश होइन। सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, हजारौँको संख्यामा ओइरिएका जनताको तथ्यांक राख्ने संयन्त्र हामीसँग छैन। यसले को–को आए, कहाँ गए, कति मानिससँग सम्पर्कमा आएजस्ता प्रश्नको जवाफ कसरी खोज्ने ? कसले दिने ?त्यसैले यदि कुनै पनि किसिमको शंकास्पद लक्षण देखिएमा नागरिक तहबाटै स्व–घोषित रूपमा कम्तीमा दुई हप्ता क्वारेन्टिनमा बसेर गाउँ–समाजलाई संक्रमणबाट जोगाउनुपर्छ।
चैत महिना नेपालको सन्दर्भमा आन्दोलन, जात्रापर्व र मौसमी रुघाखोकी एवं ज्वरो देखिने समय हो। जाडो नगइसकेको, गर्मी नआइसकेको र हावाहुरी चल्ने मौसममा स्वास्थ्य समस्या देखिनु सामान्य हो। तर,त्यस्तै समयमा देखिएको कोरोना संक्रमणले हरेक रुघाखोकीलाई संशयको घेरामा पारेको छ।
यस संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय स्व–कारावास हो। त्यसैले ‘लेट्स गेट सेल्फ क्वारेन्टिन्ड।’
कोरोना संक्रमित देशमा नेपालीको खबर खासै राम्रो छैन
यसै त महामारी त्यसमाथि मोबाइल !
नेपालमा कोरोना फैलिए के हुन्छ ?
०५ चैत २०७६
चीनबाट फर्केकाको बयान
०७ फागुन २०७६
खरिपाटी लाइभ : भाइरसभन्दा भ्रमले भय !